WAHSIGA IYO SHAQO DIB U DHIGASHADA! (Q3) – WARSOOR
WAHSIGA IYO SHAQO DIB U DHIGASHADA! (Q3)
Hawlaha kale ee qabyada ah dib u dhigo
Dabeecado yaab leh ayaa uu aadamuhu leeyahay, waxaa ka mid ah in wahsiga iyo shaqo qabashadu ku adagtahay iyo haddana in ay dhibsato qaybada oo culays nafsiya ku haya. In hawli qabyo kuu tahay waxa ay abuurtaa walaac iyo dareen ah in xil aanad gudani uu jiro. Taasi waxa ay qofka ka horistaagtaa in uu noloshiisa ku raaxaysto, marar badanna waxa ay isu beddeshaa xaalad nafsiya.
Si aad taas uga badbaaddo waxaa muhiim ah in aanad hawlqabyo kaga tegin, haddii aanay ahayn hawl dhammaystirkeedu maalmo qaadanayo oo maalinteeda ama saacaddeeda la sugayso. Waxyaabaha qabyada keena waxaa ka mid ah qofka oo dhowr shaqo mar wada bilaaba, waxaa laguugula talinayaa in shaqooyinka kuu yaallaa sida ay u kala horreeyaan ama u kala muhiimsanyihiin aad u bilowdo kaddibna aanad mid kale bilaabin iyada oo midda hore qabyo ah, haddii aanay jirin sabab cad oo arrintaas kallifaysaa.
Waxa kale oo qabyada keena in aad waqtigaaga maamuli kari weydo, tusaale ahaan in saacado ama maalmo shaqo kuugu qornaa aad hakiso oo wax kale aad ku mashquusho. Nafta raaxo iyo nasasho ha barin iyada oo aan waajibkeeda qabsan. Haddii ay shaqadeeda ka soo baxdana ha kala bakhaylin waqti iyo maalmo nasasho ay ku raaxaysato.
Cadaadis iyo qoorqabad ha ku shaqayn
Daraasado badan ayaa lagu sameeyey xidhiidhka ka dhexeeya cadhada iyo kacsanaanta qofka iyo hawlgudashada iyo guusha. Natiijada lagu ogaaday waxaa ka mid ah waxa loo yaqaanno ‘Xeerka Yarkes-Dadson’. Qaanuunka Yarkes-Dodson waa tijaabo lagu ogaaday in xidhiidhka ka dhexeeya cadaadiska qofka la saaro iyo hawlgudashadiisa.
Qaanuunkan waxaa asalkiisa sannadkii 1908 dejiyey Robert M. Yerkes iyo John Dillingham Dodson oo ahaa lama caalimo oo cilminafsiga aad looga dambeeyo. Markii dambe waxaa loo bixiyey isku darka labada magac ee labada caalin oo ah ‘Yerkes-Dodson Law’. Waxa uu dhigayaa in hawlgudashada qofku ay la korodho marka uu qofku maskax ahaan ama jidh ahaan baraarugsanyahay ama dareenkiisa qiiro iyo xamaasad hawshan ku aaddani ku jiraan. Laakiin haddana ay leedahay xuduud iyo meel cayiman oo ay ku dhammaato, marka heerka baraarugsanaantu aad kor ugu kacana ay haddana hawlgudashadii hoos u soo dhacayso.
Taas macnaheedu waa in haddii aad shaqada ku gasho qiiro iyo xamaasad aad u sarraysa, in Bilowga ay si fiican meel u gaadhayso hawlgudashadaadu, laakiin mar kasta oo xamaasaddaasi sii korodho in ay haddana bilaabayso hoos u soo dhac. Maadaama oo hawshan xadkeeda la dhaafiyey ay qofka muddo kaddib ku keenayso gaabis iyo tamartii xiisuhu abuurayey oo yaraata shaqadii oo aan dhammaan.
Waxaa la mid ah xamaasadda iyo qiirada gacan ku rimiska ah ee uu qofku ku galo shaqada kaddib marka cadaadis kaga yimaaddo maamulkiisa, taas oo muddo yar kaddib dib u shiikhda ugu dambayntana keenta wahsiga iyo in qofku shaqo kasta ka cagajiido. Taladu waa in qofku uu ku hawlgalo dareen labadaas u dhexeeya, oo aasaaskiisu yahay in qofku aanu qiiro ama qoorqabad midna ku shaqayn ee ku dadaalo in uu isxilqaan iyo masuuliyad-gudasho u arko.
TEKNOOLAJIYAD KU CAAWIN KARTA
Waxaa jira barnaamijyo badna oo uu qofku talefanka gacanta ee casriga ah ama kombiyuutarka ku shuban karo, kuwaas oo awood u leh in ay u jaangooyaan waqtiyadiisa hawleed. Waxaa ka mid ah barnaamij lagu magacaabo ‘Checkli – Make Checklist for everything’ waxa uu awood kuu siinayaa in aad ku kaydiso dhammaan hawlaha ku yaalla, mid kasta oo ka mid ahna aad sixi karto marka ay kaad hammaato. Sida oo kalana aad ku maamuli karto hawl maalmeedka shaqaalahaaga. Barnaamijkan waxa aad ka raaci kartaa ‘linkigan’, kaddibna isaga ayaa ku hagaya https://www.checkli.com/. Waxaa aad ku soo dejisan kartaa talefankaaga gacanta ama kombiyuutarkaaga.
Waxaa iyaguna jira barnaamijyo qofka waqtiga u gooya
Xeeladda Tamaandhada, barnaamijkan oo magaciisa aftalyaaniga ahi yahay ‘Pomodoro Technique’. Barnaamijkan oo uu nin Talyaani ahi aasaasay dabayaaqadii Siddeetamaadkii waxa loogu talagalay in waqtiga shaqada ama hawlgudashada uu inoo qayb-qaybiyo waqtiyo mid kastaa 25 daqiiqo yahay, oo ay ku dhex jirto nasasho shan daqiiqo ahi. Waxa aanu aaminsanyahay in nasashadaasi ay qofka ku abuurayso firfircooni uu hawshiisa ku sii ambaqaado. Isla markaana ay kor u kacdo dhugmadiisu.
Qaabka uu barnaamijkani u dejisanayaa waa in shaqada aynu u qaybinno lix tallaabo:
Go’aanso shaqada aad qabanaysaa ta ay tahay.
Buuxso saacadda jaangoynta ee uu wato barnaamijka ‘Pomodoro’ oo u xidhxidhan qaybo 25 daqiiqo ah oo nasasho ku dhex jirto. Inta qaybood ee aad dooranaysana adiga ayaa u xor ah, 10 qaybood oo min 25 ah ama ka badan iyo ka yar midda aad doonto.
Jooji shaqada marka la gaadho waqtiga aad xaddidatay ee 25 ka daqiiqo ah oo nasasho 5 illaa 10 daqiiqo ah qaado.
Haddii aad xaddidatay saddex ‘Pomodoros’ dib ugu noqo tallaabada labaad oo ku celceli illaa aad dhammaan qaybaha isha soo wada mariso ama soo hubiso.
Marka aad dhammaysato saddex xidhmo oo middiiba 25 daqiiqo tahay (Saacad iyo Rubuc) qaado hal nasasho oo intii hore ka yara dheer.
Barnaamijkan waxaa illaa hadda dejistay oo isticmaala dad tiradoodu dhan tahay 2 Milyan. Qaybo badan oo ka mid ahina waxa ay qireen in uu wahsigii ka daweeyey iyo in uu waxsoosaarkoodii shaqo kordhiyey.
Barnaamijkan waxa aad ka eegi kartaa linkigan:
LA SOCO QAYB KALE …..
WAHSIGA IYO SHAQO DIB U DHIGASHADA! (Q1)